R2P ခေါ် Responsibility to Protect ဘယ်အချိန်ဝင်ရောက်နိုင်သလဲ။ - ARAKAN TIME
Home / Articles / R2P ခေါ် Responsibility to Protect ဘယ်အချိန်ဝင်ရောက်နိုင်သလဲ။
R2P ခေါ် Responsibility to Protect ဘယ်အချိန်ဝင်ရောက်နိုင်သလဲ။
by ARAKAN TIME on December 07, 2019 in Articles
ရခိုင်ဒေသနေမွတ်စလင်များ၏ လုံခြုံရေးကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရက တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု မရှိပါ။လုပ်ငန်းတိုင်း မှာလုံခြုံရေးတာဝန်မယူနိုင်ဘူးလို့ အာဏာပိုင်က ရခိုင်ဒေသနေမွတ်စလင်များကိုပြောလေ့ရှိပါတယ်။
(၁)တင်ပေးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ အပေါ်ဆုံးက ပုံ ၂ ပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ဓာတ်ပုံပေါ်တွင် နံပါတ်ထိုးချင်ပါသည် မထိုးတတ်သည့်အတွက်ပါ။ ပြည်သူအားလုံး လွတ်လပ်စွာဆေးကုသခွင့်ရှိရမည်။ဆေးကို ဆေးရုံသွားပြီးကုနိုင်ရမည်။၂၀၁၂-ခု မှ ယနေ့ထိ ဆေးရုံသွားပြီးဆေးကုသ ခွင့်မရပါ။အကြောင်းပြချက်က"လုံခြုံရေးမပေးနိုင်ဘူး(မကာကွယ်နိုင်ဘူး)"
အဲ့သည်လိုဆိုရင် မိမိအစိုးရက အကာကွယ်မပေးနိုင်ရင် ဘယ်သူ့ဆီက အကာကွယ်တောင်းရမှာလဲ?အသက်အဆုံးခံလိုက်ရမှာလား?
(၂)ပုံ ၃ ကိုကြည့်ပါ အရွယ်နှင့်မလိုက်တဲ့ကလေးကမိသားစုတာဝန်ယူနေရပါတယ်။အမှန်က စစ်တွေမြို့ဈေးတွင်း မွတ်စလင်ပိုင် ဆိုင် ခန်းပေါင်း ၁၅၅ ဆိုင်ကို မူလဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေ ၅-နှစ်ရှိပီဖွင့်ပြီးရောင်းချခွင့်မရတာ ထို့အပြင် မွတ်စလင်တံငါးသည်တွေပင်လယ်ထွက်ကုန် ပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်း လယ်သမားများသည်လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်း မွေးမြူရေးသမားများသည် မွေးမြူ ရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်း မြို့ပေါ်ရှိဈေးကြီးများတွင်မွတ်စလင်များသွားရောင်းချခွင့်မရပါ။အဘယ်ကြောင့်နည်း"လုံခြုံ ရေး(အကာကွယ်)မပေးနိုင်သောကြောင့်ပါ" အကာကွယ်ပေးရမည့်တာဝန်ကအစိုးရတာဝန်ပါ အစိုးရကမပေးနိုင်ပါက Protection ဘယ် သူ့ဆီကတောင်းရမည်နည်း။
(၃)ပုံ ၄ ၅ ၆ နှင့်၇ ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်သည် စစ်တွေမြို့ မြို့ပေါ်ရှိရပ်ကွက်တစ်ခုပါ။ထို့ရပ်ကွက်၏ပတ်ပတ် လည်တွင် အထက်တန်းကျောင်းနှင့်ဆယ်တန်းစာစစ်ဌာနအမြောက်အများရှိသည့်ကြား အလွန်ဝေးသည့်သက္ကပြင်စာစစ်ဌာနသို့သွား ရောက်စာမေးပွဲဖြေဆိုနေရပါသည်။အကြောင်းရင်းက လုံခြုံရေး အကာကွယ်မပေးနိုင်ခြင်းအတွက်ပါ။နည်းတူပါ ၂၀၁၂-ခုတက္ကသိုလ် တက်လက်စ မှာ ၂၀၁၆-ခု တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်မပြုခြင်းသည် လုံခြုံရေးအကာကွယ်မပေးနိုင်ဟုပါဘဲ။ထို့အတူ ကမန်တိုင်းရင်းသားများ သည် အ ထ က(၆)တက်ခွင့်ကို ပြည်နယ်အစိုးရကခွင့်ပြုသော်လည်း လုံခြုံရေးတာဝန်ယူရမည့်ဌာနမှာ တာဝန်မယူနိုင်အကာကွယ်မပေး နိုင်ဟုပြောပြီး တက်ခွင့်မပေးပါ။အစိုးရက တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုမရှိဘူး မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီလူတွေ နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်စောင့်နေရမှာ လဲ?သူတို့ရဲ့ Protection ကို သူတို့ရတဲ့နေရာကတောင်းဆိုခြင်းသည်အဖြစ်လား?
(၄)ပုံ ၈ ကိုကြည့်ပါ။ကမန်သည်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်သည့်အတွက် ရမ်းဗြဲမြို့နေထိုင်သူများ မူလနေရာပြန်လည်နေရာချထားခြင်း သည် လုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီး မိသားစုတစ်စုကို ၅ သိန်း လူတစ်ဦးလျှင်တစ်သိန်းထုတ်ပေးပြီး ရမ်းဗြဲမြို့မှ အပြီကိုင်ခြင်းသည်မှန်ခန်း လုပ်သည့်ဆောင်ရွက်လား?ထိုလူများကို အစိုးရအနေဖြင့် အပြည့်အဝ အကာကွယ်ပေးရန်တာဝန်အပြည့်ရှိပါသည်။အကာကွယ်မပေးနိုင် သည့်အတွက်သွားနေရပါသည်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ သူတို့ရတဲ့နေရာက အကာကွယ်ယူခြင်းသည် သူတို့ရဲ Rightလို့ပြောပါကမမှား နိုင်ပါ။
(၅)ကျန်ပုံများကို လေ့လာကြည့်ပါ။အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်သည်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်ပါ။ ၅-နှစ်ရှိပြီးအမိုးဖွင့်အကျဉ်းထောင်ပမာပါ။ရပ်ကွက် မှအပြင်ထွက်ခွင့်မရှိပါ။လုံခြုံရေးမပေးနိုင်ဟုပြောပါတယ်။သွားရင်းလာရင်းတွေ့ပါက ခရီးသွားခွင့်မပြုသည့်အတွက် တိရိစ္ဆာန်ကျွဲ နွားကို နိုင်လွန်ကြိုးဖြင့်ချီပြီးယခုကဲ့သို့ တရားရုံးပို့ပြီးထောင်ချလိုက်သည်။ဒီလူတွေအတွက် ထွက်ပေါက်က သူတို့ကို ကာကွယ်သူတစ်ဦးဦး ပေါ်နိုင်ခြင်းပါ။
အပေါ်မှရှင်းလင်းခြင်း(၁) ကျန်းမားရေး(၂)အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း(၃)ပညာရေး(၄) မိမိနေရာပြန်လည်နေထိုင်းရေး နှင့်(၅)အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရေး အတွက် မိမိအစိုးရက အကာကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပါက ဒီလူမျိုးတွေ R2P တောင်းဆိုခြင်းသည်မမှားပါ။သို့မဟုတ်အစိုးရအနေဖြင့်အမြန် ဆုံးအကာကွယ်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်။